धरहरा बनिरहेको स्थानमा भवन भत्कँदा एक्साभेटर चालक गम्भिर घाईते ! -
धरहरा बनिरहेको स्थानमा भवन भत्कँदा एक्साभेटर चालक गम्भिर घाईते !
१८ भाद्र २०७७, बिहीबार १७:३९ हिमवत्खण्ड सम्बाददाताLeaveaComment on धरहरा बनिरहेको स्थानमा भवन भत्कँदा एक्साभेटर चालक गम्भिर घाईते !
काठमाडौं । सुन्धारा स्थित धरहरा निर्माण भईरहेका स्थानमा भवन भत्कँदा एकजना गम्भिर घाईते भएका छन । पुरानो सञ्चयकोश भवन भत्कँदा एक्साभेटर चालक घाईत भएका हुन। भवन भत्किएर च्यापिएका ती चालकलाई नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले उद्धार गरेका थिए। दिँउसो साँढे ४ बजेको समयमा एक्साभेटर चलिरहेको समयमा भवन एक्कासी ढलेको थियो।
घाईतेको उपचारका लागि महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पत्ताल लगिएको दवारमार्ग प्रहरी वृत्तका प्रमुख डिएसपी रामेश्वर पौडेलले जानकारी दिएका छन । घटनालगत्तै उद्धार गरिएकाले घाईतेलाई जीवित उद्धार गर्न सफल भएको डिएसपी पौडेलले जानकारी दिए।
नाला उग्रचण्डी भगवती नजिकैको हिटीबाट मुर्ति चोरी
निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको भन्दै उपत्यका नगरपालिका फोरम प्रशासनसँग असन्तुष्ट, केही समय अझै कडा बनाउन सुझाव
मजदुर दिवसमा प्रधानमन्त्रीको कविता: नेपाली मन अब फुट्दैन….
१९ बैशाख २०७७, शुक्रबार २०:२५ हिमवत्खण्ड सम्बाददाता
चौतर्फी विरोधपछि दुबै अध्यादेश फिर्ता
१२ बैशाख २०७७, शुक्रबार १२:५४ हिमवत्खण्ड सम्बाददाता
असंलग्न राष्ट्रहरुको अनलाइन शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको सम्बोधन (पूर्णपाठ)
२३ बैशाख २०७७, मंगलवार १९:३९ हिमवत्खण्ड सम्बाददाता
ठेक्का प्रथामा जनक शिक्षा,बिना प्रतिस्पर्धा काम गराँउदा नीजि क्षेत्र असन्तुष्ट !